इन्डक्शन क्युरिङ एप्लिकेसन - इन्डक्सन क्युरिङ भनेको के हो?
इन्डक्शन क्युरिङ भनेको के हो?
इन्डक्शन क्युरिङले कसरी काम गर्छ? सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, लाइन पावरलाई वैकल्पिक करेन्टमा रूपान्तरण गरिन्छ र कार्य कुण्डलमा पठाइन्छ जसले कुण्डल भित्र विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र सिर्जना गर्दछ। यसमा इपोक्सी भएको टुक्रा धातु वा कार्बन वा ग्रेफाइट जस्ता अर्धचालक हुन सक्छ। गिलास जस्ता गैर-कंडक्टिभ सब्सट्रेटहरूमा इपक्सी निको पार्न, एक विद्युतीय प्रवाहकीय ससेप्टरलाई गैर-प्रवाहक सामग्रीमा तातो स्थानान्तरण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
प्रेरण उपचार सिद्धान्त-सिद्धान्त
इन्डक्शन क्युरिङका फाइदाहरू के हुन्?
एकल कम्पोनेन्ट इपोक्सी टाँस्नेहरू जुन तातो निको हुन्छन् विभिन्न स्रोतहरूबाट तातो प्रयोग गर्न सक्छन्। सबैभन्दा सामान्य ओभन हो तर तातो एयर गन, बेक प्लेट र इन्डक्सन क्युरिङ पनि प्रयोग गरिन्छ। इन्डक्सन क्युरिङले इपोक्सीलाई निको पार्न र वरपरका कम्पोनेन्टहरूमा तातोको प्रभावलाई कम गर्नको लागि आवश्यक समयको मात्रा घटाउन सक्छ किनभने इन्डक्सन तताउनेले टाँसिने क्षेत्रमा ठीकसँग ताप प्रदान गर्दछ।
के प्रेरण उपचार मेरो आवेदनको लागि राम्रो विकल्प हो?
तपाइँको प्रदान गर्दै प्रेरण तताउने उपकरण विशेषज्ञ र निम्न विषयहरूमा तपाईंको epoxy टाँसने निर्माता जानकारीले तिनीहरूलाई उत्तम सिफारिस गर्न मद्दत गर्नेछ।
1. सामाग्री वा सब्सट्रेटहरू बाँडिएका छन् - सब्सट्रेटहरू के हुन् भनेर बुझ्दा टाँसिएको निको पार्न आवश्यक ताप दर र शक्ति निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ। उदाहरणका लागि, फलामलाई एल्युमिनियम तताउन आवश्यकभन्दा कम शक्तिले तताउँछ।
2. बाँडिएको कम्पोनेन्टको साइज - साना भागहरूलाई कुशल तताउनको लागि उच्च आवृत्ति चाहिन्छ। ठूला क्षेत्रहरूले कम आवृत्तिबाट लाभ उठाउँछन्।
3. इपोक्सी आवश्यकताहरू - त्यहाँ इपोक्सी निको पार्न न्यूनतम/अधिकतम थ्रेसहोल्ड छ। उपचारलाई प्रभाव पार्नको लागि आवश्यक न्यूनतम तापक्रम र इपोक्सी बिच्छेद हुनु अघि अनुमति दिइएको अधिकतम तापक्रम।
स्टिल सिलिन्डरमा क्वार्ट्ज चिपको बन्डिङको लागि इन्डक्शन क्युरिङ
अटोमोटिभ उद्योगको एउटा कम्पनीले १७५ डिग्री सेल्सियस (३४७ डिग्री फारेनहाइट) तापक्रममा पुग्न सक्ने इन्डक्सन तताउने प्रणालीको खोजी गरिरहेको छ र यसलाई +/- ३ डिग्री सेल्सियसको कडा सहिष्णुता भित्र समात्न सक्छ। प्रेरण हीटिंग क्वार्ट्ज चिपको बन्धनका लागि टाँसिएको टाँस्ने उपचार गर्नको लागि स्टिलको सिलिन्डर तताउनेछ। इन्डक्शन तताउने एक रुचाइएको विधि हो किनभने यसले छिटो, नियन्त्रित र अधिक समान ताप प्रदान गर्दछ।
उपकरण: DW-UHF-10kW प्रेरण हीटिंग सिस्टम यो क्युरिङ एप्लिकेसनको लागि र्‍याम्प अप गर्न र इच्छित तापक्रम होल्ड गर्न सिफारिस गरिन्छ।
यस इन्डक्सन क्युरिङ एप्लिकेसनको लक्ष्य 1.064” (2.70 सेमी) OD, 7.25” (18.41 सेमी) लामो 1” (2.54 सेमी) ताप क्षेत्रको साथ 175 C (347°) सम्मको स्टिल सिलिन्डरको दुई पक्षलाई तताउनु हो। F) र बन्धन अनुप्रयोग प्रदर्शन गर्नको लागि 60 सेकेन्डको लागि त्यो तापक्रम होल्ड गर्नुहोस्। इच्छित तापमान 13 सेकेन्डमा पुग्यो। तापमान मापन गर्न K-प्रकारको तापक्रम नियन्त्रक प्रयोग गरिएको थियो।
प्रेरण उपचार प्रक्रिया
विभाग सोधिने प्रश्न, टेक्नोलजीज ट्याग उच्च आवृत्ति उपचार, उच्च आवृत्ति उपचार प्रणाली, प्रेरणादायक उपचार, प्रेरण उपचार आवेदन, प्रेरण उपचार हीटर, प्रेरणादायक ताप तापनि, प्रेरण उपचार मेसिन, प्रेरण उपचार प्रणाली, प्रेरण उपचार के हो मेल अन्वेषण